ရင်ခုန်စရာ အလှတရားတွေ ကို ထုတ်ပြ လိုက်တဲ့ ပိုပို – Let Pan Daily
ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော်မလေး ပိုပိုကတော့ ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့စေတဲ့ သီချင်းကောင်း လေးတွေ များစွာ ထွက်ရှိထားပြီး လက်ရှိမှာလည်း သီချင်းလေးတွေဆက်တိုက်လုပ်ဆောင် နေပါတယ်နော်..။သီချင်းလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေးစပ်ကာ အသံချိုချိုလေးနဲ့ ဖျော်ဖြေတတ်တဲ့ ပိုပိုကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်း မှာလည်း ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေသူ လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း မကြာခဏ ဆော့ကစားတတ်တဲ့ ပိုပို ကတော့ ပရိသတ်တွေ အတွက် အမြဲမျှဝေလေ့ရှိသလို အခုတစ်ခါမှာလည်း သူမရဲ့ ချစ်စရာ Tik Tok Video လေးကို ဝေမျှထားပါသေးတယ်နော်..။သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေနဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို အုမဲမျှဝေတတ်တဲ့ ပိုပိုကတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း အထာကျကျ အမိုက်စားလေး ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါတယ်နော်..။
“Red. .” ဆိုပြီး သူမရဧ့ ညို့အားပြင်း အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပိုပိုက ချစ်ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း သဘောကျနေကြမှာပါနော်..။တက်ကြွမှုတွေနဲ့ အမြဲလန်းဆန်းနေပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်လေး ပိုပိုကိုတော့ မချစ်ဘဲ မနေနိုင်အောင် အချစ်ပိုနေကြမှာမို့ အသည်းလေးတွေ ပေးသွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်..။
Photo Credit – Ne Ro
ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္မေလး ပိုပိုကေတာ့ ပရိသတ္ေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစတဲ့ သီခ်င္းေကာင္း ေလးေတြ မ်ားစြာ ထြက္ရွိထားၿပီး လက္ရွိမွာလည္း သီခ်င္းေလးေတြဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္ေနာ္..။သီခ်င္းေလးေတြကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးေရးစပ္ကာ အသံခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတတ္တဲ့ ပိုပိုကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္း မွာလည္း ပရိသတ္ေတြကို အခ်စ္ပိုေစသူ ေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
Tik Tok ဗီဒီယိုေလးေတြကိုလည္း မၾကာခဏ ေဆာ့ကစားတတ္တဲ့ ပိုပို ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ အၿမဲမွ်ေဝေလ့ရွိသလို အခုတစ္ခါမွာလည္း သူမရဲ႕ ခ်စ္စရာ Tik Tok Video ေလးကို ေဝမွ်ထားပါေသးတယ္ေနာ္..။သူမရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေလးေတြနဲ႔ အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြကို အုမဲမွ်ေဝတတ္တဲ့ ပိုပိုကေတာ့ အခုတစ္ခါမွာလည္း အထာက်က် အမိုက္စားေလး ဓာတ္ဖမ္းထားတဲ့ သူမရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ ဖမ္းစားလိုက္ျပန္ပါတယ္ေနာ္..။
“Red. .” ဆိုၿပီး သူမရဧ့ ညိဳ႕အားျပင္း အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြကို ပိုပိုက ခ်စ္ပရိသတ္ေတြကို ေဝမွ်ထားတာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြလည္း သေဘာက်ေနၾကမွာပါေနာ္..။တက္ႂကြမႈေတြနဲ႔ အၿမဲလန္းဆန္းေနၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ေလး ပိုပိုကိုေတာ့ မခ်စ္ဘဲ မေနႏိုင္ေအာင္ အခ်စ္ပိုေနၾကမွာမို႔ အသည္းေလးေတြ ေပးသြားၾကဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ဦးေနာ္..။
အတွင်းခံလေး နဲ့ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းလောက်အောင် မိမိုက်နေတဲ့ ပိုပို
အမကြီးဆိုတာ အငယ်တွေအတွက် အနစ်ခံတတ်သလို မိသားစုအတွက်လည်း အမိုးကာကြီး တစ်ခုပါဆိုတဲ့ ဘေဘီမောင်
ဆက်ဆီ ကျလွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသတွေ ရင်ဖိုစေမယ့် ဆက်ဆီမော်ဒယ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်